सिलवालले प्रहरीलाई भने- फेरि सरुवा होला नि ! « News24 : Premium News Channel
सिलवालले प्रहरीलाई भने- फेरि सरुवा होला नि !
काठमाडौँ । दौरासुरुवाल र कोटमा सजिएर मनोनयन गर्न पुगेका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल बिहीबार अपराह्न साढे २ बजे निर्वाचन कार्यालय ललितपुर पुग्दा उनलाई सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले ‘स्यालुट’ ठोके । हात उठाएर प्रहरी हाकिमकै शैलीमा ‘स्यालुट’ फिर्ता गर्दै उच्च अधिकारीसँग हात मिलाए।
निर्वाचन कार्यालयको मूल गेटबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै उनलाई अन्य प्रहरीले पनि ‘स्यालुट’ ठोके तर उनले हात उठाएर अभिवादन गर्दै व्यंग्यामक शैलीमा भने ‘मसँग हात मिलाउँदा फेरि सरुवा होला नि।’ आजको राजधानीमा खबर छ ।
प्रहरी प्रमुख बन्न अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा सफल नभएपछि राजीनामा दिएर नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा होमिएका सिलवालले ललितपुर–१ बाट प्रतिनिसभातर्फ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका हुन् ।
उनको प्रतिस्पर्धा कांग्रेसका युवा नेता तथा अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर जबरासँग हुँदै छ। सिलवालसँगै मनोनयनका लागि निर्वाचन कार्यालय पुग्दा सिलवालले बस्ने कुर्सी पाए तर राज्यमन्त्री राणाले पाएनन्। उनी मनोनयनका लागि आफ्नो पालो नआउन्जेल उभिए। सिलवाललाई भने बस्ने कुर्सीको व्यवस्था थियो।
तरुण दलका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राणाले दोस्रोे संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले नेता मधुसुदन पौडेललाई पराजित गरेका थिए। त्यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको पोल्टामा गएको यस क्षेत्रमा यसपटक भने अर्थराज्यमन्त्री र पूर्वडीआईजी सिलवालबीच रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ।